Valverde oo ka hadlay aragtida uu ka qabo hadii ay Real Madrid u sii tartami karto La Liga, kadib guuldaradii Real Sociedad – Gool FM
Valverde oo ka hadlay aragtida uu ka qabo hadii ay Real Madrid u sii tartami karto La Liga, kadib guuldaradii Real Sociedad
Dajiye January 7, 2019
(La Liga) 07 Jan 2019. Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa diiday inuu ka saaro Real Madrid loolanka loogu jiro horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan, inkastoo ay kala kulmeen guuldaro 2-0 ah kooxda Real Sociedad.
Ernesto Valverde ayaa kadib guushii 2-0 ahayd ay xalay ka gaareen kooxda Getafe ayaa wuxuu kasoo hor muuqday saxaafada wuxuuna yiri:
“Maanta waxaan ogaanay natiijada dhamaan kooxaha Atletico, Sevilla iyo Real Madrid, waxayna ahayd inaan ka faa’iideysano fursadan, waxaan aadnay garoon aad u adag, waxaan xakameenay qeybta hore ee ciyaarta, balse qeybta labaad Getafe ayaa sameesay cadiidis xoogan, waana ku dhibtoonay”.
“Kama saarayo Real Madrid loolanka loogu jiro horyalka La Liga, sidoo kale dhamaan kooxaha kale, horyaalka La Liga wali waxaa ka harsan kulamo badan, wali waxaa ka harsan kulamo si loo soo gaba gabeeyo qeybta hore ee horyaalka, horyaalka wali waa mid fog”.
“Inkastoo ay kala duwan yihiin xilli ciyaareedkii hore iyo kan haatan, sababtoo ah waxaa jiray tartan adag ilaa iyo heerka ugu dambeeyay, sidaas darteed waxba ma aysan dhicin inkastoo uu farqi jiro, tartamayaasha oo dhan waxay leeyihiin fursado xitaa Real Madrid”.
Intaas kadib Ernesto Valverde ayaa u soo jeestay inuu ka hadlo ciyaartii adkeyd ay la qaateen kooxda Getafe wuxuuna yiri:
“Getafe waa koox ku xoogan weerarada gaadmada ah iyo kubadaha gees ka laadka, waa koox aad u adag ee bahal ah”.
Tababare Solari iyo Emilio Butragueño oo si kulul u eedeeyay muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR kadib guuldaradii Real Sociedad